यस्तो छ यौन सम्पर्कका बारेमा हरेक दम्पतीले जान्नैपर्ने कुरा - Gokarna News from Nepal
यस्तो छ यौन सम्पर्कका बारेमा हरेक दम्पतीले जान्नैपर्ने कुरा
काठमाडौं– यौन चरमानन्दको अनुभूत गर्ने माध्याम हो । यो एउटा सुखद अनुभव हो । यौनको प्रसंगमा हामी लजाउने गर्छौं । यौनलाई छाडा भन्छौं । जबकी यो प्राकृतिक कुरा हो । र, सृष्टिलाई चलायमान राख्नका लागि यौन अपरिहार्य हुन्छ ।
यौनमा चरम सन्तुष्ट छ । यो दाम्पत्य सुखको एक तत्व हो । दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्नका लागि यौनले भूमिका खेल्छ । के पनि भनिन्छ भने, सक्रिय यौन जीवनले दम्पतीको सम्बन्धमा मात्र निकटता ल्याउने होइन, स्वास्थ्य लाभ पनि मिल्छ । तर, यौनको पनि आफ्नै मान्यता छ । परिधि छ । नियम छ ।
यौन सम्पर्क कहिले गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कहाँ गर्ने, कुन स्थितीमा गर्ने भन्ने कुरा तय गरिएको छ । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर यौन क्रिया गर्दा चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ भनिन्छ । साथै स्वास्थ्यलाई पनि लाभ मिल्छ ।
यौन हरेक व्यक्तिको आवश्यक्ता हो र सुखद अनुभूति पनि । त्यसैले यौन सम्पर्क राम्रो भावनाले गर्नु जरुरी छ । आनन्ददायक यौन सम्पर्कका लागि पार्टनरसँग समर्पणका साथसाथै सहयोग र सहमति पनि जरुरी छ । यदि पार्टनरलाई यौनमा रुची छैन भने जबरजस्ती गर्नु गलत हो । यौन सम्पर्कलाई लिएर दम्पतीबीच विभिन्न खालका प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । जुन प्रश्नहरुको उत्तर खोजिएको छ ।
कुन परिस्थितीमा यौन सम्पर्क गर्नबाट बच्नुपर्छ र किन ?
धेरैजसो दम्पती यस सम्बन्धमा त्यती जानकार हुँदैनन् । कहिले यौन सम्पर्क राख्ने र कहिले नराख्ने रु यस्ता कुरामा बेखबर रहेर यौन सम्पर्क गर्दा त्यसबाट जुन आनन्द पाउनुपर्ने हो, त्यो पाइदैन । साथै त्यसको असर स्वास्थ्यमा पनि पर्छ । त्यसैले सम्भवत भएसम्म शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थ्य भएको बेला यौन सम्पर्क राख्नु उचित मानिदैन ।
शारीरिक समस्याको बेला किन यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन ?
यौन सम्पर्क शारीरिक क्रिया हो । तर, यसमा मानसिक उपस्थिति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । मानसिक तनावको अवस्थामा वा कुनै मानसिक समस्या छ भने त्यस्तो बेला यौन सम्पर्कबाट आनन्द लिन सकिदैन । डिप्रेसन, तनाव जस्ता कुनैपनि समस्यामा यौनको रुची नै जाग्दैन । जब यौनमा रुची छैन भने जबरजस्ती यौन क्रिया गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
कक्षाकोठाभित्रै प्रधानाध्यापकले हथौडाले हानेर १६ वटा फोन फुटाइदिएपछि…
यो हो काठमाडौंमा यौनसम्पर्क गर्ने नयाँ स्थान
यौन सम्बन्धी नियम यस्ता छन् प्राचिनकालमा
यस्ता सपना देख्नुभयो भने हुनेछ अचानक धन लाभ